Osama bin Laden killed in CIA operation | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Osama bin Laden killed in CIA operation
Posted by MaungMin on May 2, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
ဟုတ်တယ်ဗျို့၊ စီအန်အန်မှာလည်း တင်ထားပါတယ်။ အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပါကစ္စတန်မြို့တော် အပြင်ဖက်ရှိ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ ရဲတိုက်လိုအဆောက်အဦးတခုမှာ အခြားမိသားစုဝင်များနဲ့အတူ အသေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အလောင်းကိုလည်း လက်ဝယ်ရပြီးထားပြီလို့ အမေရိကန် သမတအိုဘားမားက ပြောပါတယ်။ အခုစစ်ဆင်ရေးမှာ အမေရိကန်ဖက်က တဦးတယောက်မျှ ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်… စီအိုင်အေနဲ့ အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ။ တလက်စထဲ မြန်မာပြည်ကိုလည်း လုပ်ပေးပါအုံး။ ဘင်လာဒင်လောက်ခက်မယ်မထင်ပါ….
စီအန်အန်ဘလော့မှာတော့ ဘင်လာဒင်ဟာ ခုခံရင်း သေဆုံးသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုကို အမေရိကန်ရေတပ် အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ navy seals ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ နေဗွီဆီးလ်တို့ရေ…. ဘင်လာဒင်နဲ့အတူ အခြားအမျိုးသား သုံးဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတဦးတို့ပါ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ဖက်ကတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုမရှိခဲ့ပါ။ ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦးဟာ မြို့တော်အစ္စလာမ်မာဘတ်ကနေ ကီလိုမီတာ တရာလောက်ဝေးတဲ့ အဘိုတာဘတ်မြို့ရှိ သုံးထပ်အမြင့်အဆောက်အဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အဆောက်အဦးဟာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အဆောက်အဦးများထက် ရှစ်ဆကြီးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဟာ အဲဒီအဆောက်အဦးထဲမှာ မိနစ်လေးဆယ်လောက် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ (ဝင်ရောက်စီးနင်းမှု အော်ပရေးရှင်းက မိနစ်လေးဆယ်လောက် ကြာတဲ့သဘောပါ)။
ပြည်တွင်းမှာ လူကြိုက်နဲလာနေတဲ့ သမတ အိုဘားမားအတွက်တော့ စိတ်သက်သာစရာ သတင်းကောင်းပါဘဲ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲကို အမေရိကန်တပ်တွေဝင်စီးတာမိုလို့ မအောင်မြင်ခဲ့ရင် တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်။ သတင်းအတိအကျကို ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးကပဲပေးသလား၊ စီအိုင်အေကပဲ သူ့ဖာသာသူရသလား သိရတော့မှာပါ။ အမေရိကန်ကို ပါကစ္စတန်က မလှိမ့်တပတ်လုပ်ထားခဲ့တာဆိုရင်တော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါပဲ။ တလောကတင် အမေရိကန်က ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးကို အယ်ကိုင်းဒါးနဲ့ပေါင်းရိုက်နေတယ်လို့ စွတ်စွဲမှုအကြီးအကျယ်ရှိထားတော့ တကယ်ပဲလား၊ ဘင်လာဒင်ကို ထောင်ချောက်ဆင်လိုက်တာလား မကြာခင်သိရတော့မှာပါ…
strong>[Updated, 12:54 a.m. ET] CNN’s Chris Lawrence, citing U.S. officials, reports that the compound where bin Laden was found – in Abbotabad, Pakistan, about 100 kilometers outside Pakistan’s capital of Islamabad – was three stories tall, and about eight times larger than any of the buildings around it.
An official saida“small U.S. team” was involved in the operation at the compound – the official would not confirm any U.S. military involvement. An official said bin Laden resisted the assault – and was killed in the firefight.
Obama confirms bin Laden has been killed in U.S. assault
သတင်းထူးပေါ့။ ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များနှင့် သတင်းများ သိရတဲ့ အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်။
ကိုကြောင်ကြီးပြောတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေ သိရရင်လဲ ဆက်တင်ပေးပါဦးဗျာ
သမ္မတ အိုဘားမား – အိုစမာဘင်လာဒင်ကို ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းပြောနေတာကို ဒီမှာလဲ ကြည့်လို့ရပါတယ် …
ကမ္ဘာကြီး တော့ တခြမ်း ငြိမ်းချမ်း သွားပြီပေါ့။
မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေ ကို လက်တလုံးကြား လုပ်နေတဲ့ မကောင်း ဆိုးဝါးတွေ ကို ပါ ရှင်း ပေးနိုင်ရင် တကမ္ဘာ လုံး ငြိမ်းချမ်းမယ်။
ရွာထဲက.. ဦးဦးဖက်တီးက.. မြန်မာပြည်ကဘိုးတော်ဘွားတော်တွေ.. မှော်တန်ခိုးနဲ့.. ဘင်လာဒင်ရှိတဲ့နေရာ.. ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးပြီး…ဆုတော်ငွေထုတ်ကြမယ်…ပြောထားတာ..